Buundada FSM waa la dhameystiray | RayHaber | raillynews
[08 / 02 / 2020] Waxaa lagu dhisi doonaa Metrobus Route	34 Istanbul
[08 / 02 / 2020] Nolosha dhulka hoostiisa ee Istanbul: Howlaha metro	34 Istanbul
[08 / 02 / 2020] laf-dhabarka ugu weyn ee Sector Railway Logistics Master Plan Turkiga	06 Ankara
HometareenkaShaqooyinka FSM Bridge waa la dhammeeyaa
02 / 02 / 2015 tareenka, GUUD, WADADA, Headline
FSM Bridge at Work buuxiya: Gaadiidka, Wasiirka Arrimaha iyo Communications Maritime Lutfi Elvan, Fatih Sultan Mehmet Bridge nidaamka ururinta toll in 25 January xnumx't bilaabay in la dhameeyo baadhitaanka, sharxay socodka gaadiidka ee biriijka ka dib markuu dhammaado dib u caadi ah ka 2015 taabto saacad.
Lutfi Elvan, Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaadhsiinta, ayaa yimid Istanbul. ELVEN, xnumx't January 25 ee Fatih Sultan Mehmet Bridge (FSM) ee hawlaha bilaabmay nidaamka ururinta lacagta iyo dhamaystirka socodka gaadiidka ee buundada maanta ku dhawaaqay saacado ka dib markii qaabadii ugu dambaysay oo uu ku soo laabto caadi ka 2015.
FSM oo muujinaysa in baaxadda shaqo ee nidaamka ururinta toll free ee kiro buundada Cirkana dhismo oo kiro meelaha jasiiradda la saaraa Lutfi Elvan, carabka ku adkeeyay in maalmaha 6 ganacsi la qorsheeyay ka hor dhameystirtay.
Wasiirka Elver ayaa tilmaamay in shaqooyinka si taxadar leh loo fuliyay badbaadada nolosha iyo hantida darawallada, waxayna sheegeen in darawallada ay heli doonaan sahlan. Elvan waxa uu xusuusiyay in ay jiraan dhibaatooyin ka dhex socdaan wadooyinka oo ay ugu wacneyd daraasaadka waxayna u mahad celiyeen dadka deggan Istanbul oo dhan dulqaadka.
Iyada oo la baabiiyo of kiro jasiiradda geli doona haad isbedel darawalka buundada FSM by dhaqaaqin ka 5 wadada haad iyo si looga hortago doonaa qashinka waqtiga. Maxaa yeelay, gaariga aan u baahan doontaa in la hagaajiyo Inaan OGS xeerka cusub ama marinka HGS labada nidaamka on strip kasta in uu noqdo nidaamka aqoonsiga.
WAA MAXAY WAXAY LEEYAHAY FSM?
5 Piece Xafiiska Box ayaa la jabiyay xayiraadaha.
Meelaha qoditaanka curtaanka ah (10m ballaaran 30m) ayaa lagu qoday godadka la isku qurxiyo ee jasiiradaha jasiiradaha.
Waxaa la hubiyey in taarikada saxda ah lagu jarjaray habka sawir gacmeedka.
Ka saarista xargaha wax lagu xoojiyay ee la xoojiyey iyadoo la adeegsanayo 100 Ton Crane ayaa la qabtay.
Huuradaha lakulanka ayaa lagu jajabiyay dhulka oo leh mashiinno wax lagu jajabiyey oo la geeyay goobta dump.
Laba dariiq oo xoogan oo xooggan oo culeyska lugaha ah ayaa laga jaray saldhigga ceelka iyadoo la jarayo habab sawir leh.
5 jasiiradaha jasiiradda iyo xarumaha 2 ee aasaasiga cagaha ayaa loo jajabiyey heerka dhulka waxayna diyaariyeen asfalt.
counter 5 kasta nabaad dusha laami dhaca inta lagu guda jiro shaqo ku xasuuqeen dhammaan meelaha jasiiradda sameynta in dayactirka trimer xiran bituminous waxaa lagu sameeyaa jirka mishiinka ugu wayn ee qaybtan oo waddada weyn kemirilip nadiifiyey dusha.
All khadadka sixitaanka ee suuqa kala iibsiga si ay hab waterjet cusub ee tirtirto 5 marinka fur-haadka hoos jid la soo gabagabeeyo sida ay mashruuca iyo xariiqyada taagan for khadadka haadka dushiisa laami ah nidaamkii hore ee ahaa diyaar u qorsheyneysa xafiiska guurka.
Inta lagu jiro dhammaan daraasaddan, tallaabooyinka amniga ayaa la qaaday heerka ugu sareeya waxaana loo baahan yahay daryeel lagamaarmaan ah si looga hortago qaybo ka mid ah baabuurta lagu burburiyay bii'ada iyo gaadiidka.
OGS IYO HGS ee KOOXAHA STRIP
Waxyaabaha lagama maarmaanka u ah in la sameeyo doorbidka ribbada ee dhibcaha lacag ururinta ayaa la tirtiri doonaa.
Nidaamyada OGS iyo HGS waxay kaliya ka qaadi doonaan macaamiishooda.
Nidaamka OGS wuxuu ogaanayaa dadka baxsadaa nidaamka oo idil.
saxan hore ee maraya baabuur in la ogaado by camera nidaamka ETC halka gaariga waa in la soo eedeeyay ay u sumadaha ETC nidaamka ETC, qoraalka waa in la eedeeyay by nidaamka HGS HGS ah.
Nidaamka OGS, baabuurta ka tirsan nidaamka HGS iyo gawaarida gudbiya xogta saxda ah ee nidaamka HGS iyada oo la adeegsanayo barnaamijka. Macluumaadka saxda ee baabuurta ee ay bixiso nidaamka HGS ayaa lagu diiwaangelin doonaa codsiga ka-dhaafka kadib marka baabuurka mar labaad loo wargeliyo nidaamka OGS.
FSM Bridge waxay ku shaqeysaa horumar
Nidaamka Badeecadda Bilaashka ah waxaa lagu bilaabi doonaa FSM Bridge
Lane kale oo kudhaca FSM Bridge
Dabka Dabdamiska FSM
4 qashin qubka buundada FSM
Ka shaqee Saldhiga Saldhigga
Ka shaqeeya Bay Bridge
Gacanka Kacsan ee Gacanka Iskuday
Goobta Fudud ee Buundada Baartay
Nidaamka aruurinta lacagta
Daraasadaha FSM Bridge
Idaacaddaha tareenka ayaa daadanaya biyaha
FSM Bridge laga bilaabo maanta ayaa loo gudbin doonaa nidaamka Pass Pass